UBenni McCarthy uzothulwa njengomqeqeshi weqembu lePSL | News24
UBenni McCarthy uzothulwa njengomqeqeshi weqembu lePSL
Cape Town - UBenni McCarthy useqokwe njengomqeqeshi omusha weCape Town City FC kanti kulindeleke ukuthi ethulwe ngokusemthwethweni yile kilabhu esikhathini esingamahora angu-48 alandelayo.
Ngokokuqonda kweSport24, uMcCarthy ubambe indiza elibangise eCape Town ngoLwesihlanu ngenhloso yokuhlangana nomnikazi weCity, uJohn Comitis, baphinde baba nezingxoxo zokuthi bangalisa kanjani iqembu phambili kulandela ukusula isigubhukane kobengumqeqeshi walo, u-Eric Tinkler, nogcine ethathe izintambo zokuqeqesha iSuperSport United.
Le nkakha eneminyaka engu-39 ubudala – nenomlando omuhle ebholeni lakuleli – izonikezwa umsebenzi wayo wokuqala njengomqeqeshi ngemuva kokuphothula izifundo ze-UEFA A coaching licence kanti kulindeleke ukuba abe ngabanye babaqeqeshi abakhulu esigabeni sePremier Soccer League (PSL).
OLUNYE UDABA: Owayeqeqesha iPirates ohlwini lwabagaqele umsebenzi kwelePSL
UMcCarthy useke wadlala e-Europe ngaphansi kwabaqeqeshi abahlukene abasezingeni lomhlaba – nokubalwa kubo uJose Mourinho – nalapho agcina ebe ukuphela komdlali waseNingizimu Afrika ukuthi awine isicoco seChampions League.
Ngaphambili uComitis wathi usebenza ubusuku nemini ukuthola umqeqeshi ofanelekile ozovala isikhala sikaTinkler futhi ukholwa ukuthi usemtholile umuntu ongaqhubeka nomsebenzi uTinkler ashiye engawuqedelanga.
“Umqeqeshi omusha kuzoba onomqondo ofanayo (noTinkler) mayelana nohlobo lwabadlali esibathengile kanye nendlela iCape Town City efuna ukudlala ngayo.
“Umqeqeshi esimkhethayo uzothatha umgqigqo esesiwakhile. Ngokuzilungiselela esengikwenzile, ngikholwa ukuthi kungenzeka ngithole osezingeni eliphezulu.”